Ndi Ebe Gị, Blog, ma ọ bụ Nri Geotagged? | Martech Zone
Otu ụzọ dị mma maka ịchọta saịtị bụ geographically. Achọpụtara m n'ezie na otu enyi m na-arụ ọrụ nwere blog site na ịchọta ya na maapụ. E nwere ọnụ ọgụgụ nke ebe nrụọrụ weebụ si n'ebe ahụ ebe ị nwere ike biputere ọnọdụ blog gị ma ọ bụ ọnọdụ saịtị ya site na nhazi njikwa ala. Agbanyeghị, ịkwesịrị itinye ụfọdụ mkpado meta na saịtị gị ka achọta.
Anọ m na-achọ ime nke a n'ihi na a mgbe, ma e nwere n'ezie bụ bụghị a dị mfe ngwá ọrụ si n'ebe ahụ iji wuo mkpado m… ruo ugbu a! N'abalị a, amalitela m Adreesị Adreesị.
Enwere ike iji saịtị ahụ hichaa adreesị, chọta ohere na longitude gị, ma mepụta ya na akpaghị aka geotags maka ebe nrụọrụ weebụ gị, blog na / ma ọ bụ ha RSS nri.
Nke a bụ nhụchalụ:
Dị nnọọ idetuo na mado meta na mkpado na nkụnye eji isi mee nke gị website ma ọ bụ blog na gị ọzọ meta na mkpado. Nwere olileanya na ọ masịrị gị!
FeedPress na-enye gị ohere Geotag ndepụta RSS gị. Nwere ike idetuo na mado ohere na longitude gị n'ime Feedburner n'okpuru ebuli - Geotag ndepụta gị.
Ndị mmekọ Amazon: Ọ nwere onye na - akpata ego ọ bụla?
Dec 23, 2006 na 11:23 PM
Echiche dị jụụ - ntinye dị mma. Naanị ebe ị na-achọta oge!
Dec 23, 2006 na 11:26 PM
Daalụ, RoudyBob. Kidsmụ m nọ na mama ha maka Christmas… nke na-ahapụ bachelor Doug na kọmputa ya! Enwere m ọtụtụ ọrụ dị ka nke a bidoro ma kwụsị. Ọ ga-abụ izu na-arụpụta ọrụ!
Dee 24, 2006 na 12: 44 AM
Ọ DỊ MMA. Nke a dị mma. Daalụ.
Dee 24, 2006 na 1: 53 AM
Dee 24, 2006 na 11: 48 AM
M na-agụ ma na-eche banyere ya mgbe niile, mana anaghị m eme ya. Echiche mara mma na ezigbo ngwá ọrụ.
Dec 24, 2006 na 12:01 PM
Anọ m na-edebe Google. Kwere ma ọ bụ na ikwenyeghị, map ha bụ ihe na-aga n'ihu. Ọ bụrụ n’ịchọrọ iwulite ngwà ma wepu ya oge, ha na-enye ụdị ọrụ ikike ụlọ ọrụ.
M zutere na nnọọ ole na ole n'ime ha otu si Mountain View afọ gara aga na n'anya hụrụ ngwá ọrụ dị ka nke a mere na m na-adịghị kwa nchegbu banyere ya. Ọ dịghị amasị ka m ga-akụ ụzọ ha n'ụzọ hits!
Banyere CSS, agburu m naanị ntụgharị naanị CSS na ebe ahụ. Ọ dị mma. Amaara m na nke ahụ abụghị usoro kachasị mma, mana ntụgharị na-adị njọ nke na anaghị m etinyekwu mgbalị na ya. M na-aghọta na ike furu efu ndị na-ekiri lost ma oh ọma.
Dec 25, 2006 na 11:46 PM
Nwelite: edozi m ụfọdụ chinchi na-eweghachi ụfọdụ adreesị mba ọzọ na-enweghị data. M ka nwere nsogbu na ịlaghachi obodo ma ọ bụrụ na Canada mana m na-arụ ọrụ na ya!
Jenụwarị 3, 2007 na 6:20 PM
Verry dị jụụ
Mike si Germany
Jan 5, 2007 na 11: 42 AM
Ọ dị oke mma!
Enwere onwe gị ịhapụ ma depụta saịtị gị na http://www.gmapsdirectory.com
Akwụkwọ ndekọ ederede
Jenụwarị 5, 2007 na 7:39 PM
Daalụ, Brian! M na-etinye ya n'abalị a!
Jan 10, 2007 na 9: 20 AM
Nwalee ya na adreesị m na Norway, wee nweta ozi "Ndo". Maka ọchị m gbalịrị ịbanye naanị "Norway". M ga-achị ọchị mgbe m nwetara nsonaazụ ahụ 🙂
Daalụ! (na enweghị mkparị n'ebe ahụ!)
Jenụwarị 27, 2007 na 12:49 PM
Ọ dị mma maka North America, mana ịkwado UK.
Nwere ike iji Geocoder ọzọ maka UK nke na-arụ ọrụ dịka
Jenụwarị 27, 2007 na 1:08 PM
Daalụ, mapperz… na nnukwu saịtị! You ma nke ọ bụla agaghị emeli tinye n'ọrụ emad geocoding engine? Enwere m ike ịnwale ya iji hụ ka ọ si aga. Ọ ga-emekwa ka ọrụ ahụ dịkwuo mma ebe ọ bụ na enwere m ike ịjụ ndị ọrụ ọtụtụ ụzọ (ekwentị, wdg).
Jenụwarị 27, 2007 na 1:40 PM
Achọpụtaghị ihe mgbochi site na isi mmalite. Ma achọpụtala na data abụghị okpueze nwebiisinka (site na ịlele akara ngosi (koodu koodu zigara) na adreesị.
Ọ bụ ihe dịka 93% ziri ezi na UK.
You nwere ihe atụ RSS faili ntanetịime?
Gbalịrị ịgbakwunye georss (.xml) na nke a
Na-arụ ọrụ na BBC Weather RSS
ma ọ bụghị
Jenụwarị 27, 2007 na 4:44 PM
Ekwenyere m na ọ bụ okwu ikpe () vs. ). Emechara m gbanwee koodu ya niile
Mar 11, 2007 na 7: 02 PM
Ọ bụ naanị m ka ọ bụ mpempe KML anaghị emelite mgbe ọ bụla m na-ebugharị akara ahụ?
Ihe ọ bụla ọzọ karịa nke a: nnukwu echiche na ihe bara ezigbo uru. Naanị m na-eji ya eme ihe n'ụzọ siri ike maka ịbịaru akwa polygon (ntụgharị ntinye aka LineString-elements) maka ụfọdụ map google.
Mar 11, 2007 na 9: 01 PM
Daalụ maka iwetara m nke ahụ! Emeziela ya! Jiri ya mee ihe masịrị gị.
Apr 1, 2007 na 8: 14 PM
Ndewo, aha m bụ Ryan Updike. M na-eme Google Earth Project na klaasị Geography anyị nke na-arụ ọrụ na KML. Ga-enwe ike inyere anyị aka idozi ma ọ bụ nweta ụfọdụ koodu ahụ naanị iji gbanye ụfọdụ koodu KML? Anyị na-anwa ịmụta otu esi etinye akara data dị ka ntinye, wee gbanwee mmepụta na koodu xml. Ndụmọdụ ọ bụla ị nwere ike inye ga-enwe ekele dị ukwuu. Daalụ maka oge gị.
Apr 1, 2007 na 10: 37 PM
O doro anya, Ryan! Obi ga-adị m ụtọ inyere gị aka. Lelee post a yana tinye faịlụ KML. Enwere ike ịnweta ya ugbu a site na Google API iji wuo faịlụ KML na saịtị gị (nwa oge ọ dị naanị site na ibe maapụ Google.
Mee 11, 2007 na 2: 38 AM
Ee, Ọmarịcha ọkwa. Mana adighi m acho FeedBurner… Gini bu KML-file?
Mee 11, 2007 na 5: 57 AM
Hi Paul, i nwere ike ịgụ banyere KML faịlụ na edemede m dere. Ọ bụ ihu igwe na ngalaba aha njirimara edere ede na eXtensible Markup Language (XML). Enwere ihe nlele na post!
Ọkt 3, 2007 na 10:45 PM
Nke a bụ nnukwu ngwaọrụ. Ọ dị mma ịchọta ngwaọrụ dị mfe iji geotagging dị ka nke a.
Ọ dị m ka ya bụrụ na e nwere ndekọ na saịtị ndị na-eji geotagging. Onwere onye mara ihe edepụtara?
Ọkt 4, 2007 na 7:12 AM
Enwere Ndepụta. Ahụbeghị m ọtụtụ ihe na saịtị ahụ obere oge, ọ bụ ezie.
Ọkt 7, 2009 na 2:11 PM
Nnukwu ngwá ọrụ. Eji m ya mụta banyere eserese. Daalụ maka oge na ọrụ gị.